10ka Shaqo ee Macalimiinta ugu Mushaharka Badan 2022 Talooyin - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 10ka Shaqaale ee ugu mushaarka badan Macallimiinta 2022
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay hal -ku -dheggii ahaa in waxbarashadu tahay udub -dhexaadka guusha (kuma eka bartayaasha oo keliya laakiin sidoo kale macallimiinta). Waalidiinta, waa dhaxalka ugu wanaagsan ee carruurtooda la siiyo.
Ma ogtahay in dalalka qiimeeya macallimiintooda ay ka roon yihiin? Layaab ma leh Nigeria, tusaale ahaan, dowladda ayaa si tartiib tartiib ah ugu baraarugsan tan, waxay hadda siiyaan shaqo ardayda ka qalin jabisa waxbarashada, kordhinta mushaharka iyo adeegga dheeraadka ah ee macallimiinta iyo sidoo kale faa'iidooyinka kale.
Si kastaba ha ahaatee, shaqooyinka macallimiinta ugu mushaharka badan waxay ku xirnaan doontaa waddanka, goobta, aqoonta, khibradda, ilaha dhaqaalaha, iyo xitaa qiimaha nolosha.
UNESCO waxay siisay tirakoob yaab leh adduunka oo u baahan 69 milyan oo macallin si ay u gaaraan yoolalka waxbarasho ee adduunka. Faafidaan, dawladaha, hay'adaha caalamiga ah, oo ay ku jiraan UNESCO iyo UNICEF, waxay ka shaqeynayaan sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen waxbarashada iyada oo loo marayo horumarinta xirfadaha macallimiinta.
Iskaashiga Caalamiga ah ee Waxbarashada (GPE) ayaa lagu arkay adduunka oo dhan waxaa jira macalimiin macaluul adduunka oo dhan. Sanadka 2019, $ 200 milyan ayaa GPE ku bixisay tababarka macallimiinta iyo horumarinta. Cilmi -baaris ay samaysay Waaxda Cilmi -baarista ee Statista oo la daabacay 2022 ayaa muujineysa in Hindiya ay leedahay jaamacadaha ugu badan, Mareykanka ay yihiin ardayda ugu badan ee caalamiga ah halka Australia ay ku leedahay arday badan oo caalami ah celcelis ahaan dadka dugsiga sare.
Ujeeddo ahaan, waxaa jira shaqo macallimiinta markay ka qalin jabinayaan machadyada tababarka macallimiinta. Sidaa darteed, hubi xaqiiqooyinkan cajiibka ah ee ku saabsan shaqooyinka Macallimiinta ee ugu mushaharka badan.
TOP 10 WADAN OO SHAQADA BARASHADA UGU BADAN BIXIYA
Waxaa jira shaqooyin loogu talagalay Madaxda, maamulayaasha, kormeerayaasha, maamulayaasha, macalimiinta fasalka, iyo shaqooyin kale oo khaas u ah baahiyaha waxbarashada gaarka ah, isboortiga, la talinta, tirakoobka, maktabada, iyo wixii la mid ah.
Qaar ka mid ah shaqooyinka macallimiinta ugu mushaharka badan ayaa laga heli karaa qaar ka mid ah doorka waxbaridda iyo maamulka gaarka ah.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kuwan wali waa kuwo go'aamiya waddanka, goobta, u qalmidda, khibradaha sannadaha, baahida, iyo helitaanka maalgelinta. Waxaa laga yaabaa, inaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato qiimahaaga oo aad gorgortan wanaagsan u gasho.
Haddii aad ku nooshahay Mareykanka tusaale ahaan, waxaa jira rajo aad u weyn xagga waxbarashada helitaanka shaqooyinka ugu mushaarka badan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in USA ay tahay mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay ardayda ajnabiga ah.
Xog laga helay Xafiiska Shaqada iyo Tirakoobka (BLS) ayaa muujineysa in shaqaalaynta waxbarashada, tababarka iyo shaqooyinka maktabadda la filayo inay koraan 5% laga bilaabo 2019 illaa 2029 iyadoo la saadaaliyay 441,000 shaqooyin cusub. Taasi waxay ka badan tahay celceliska xirfadaha kale.
Sidaa awgeed, liiska hoos ku waxay muujinaysaa celcelis ahaan sannadkii macallimiinta ugu mushaharka badan shaqooyinka dalalkan.
SWITZERLAND - $ 110,000
LUXEMBOURG - $ 100,000
CANADA - $ 74,000
GERMANY - $ 70,000
NETHERLANDS - $ 67,000
AUSTRALIA - $ 67,000
MARAYKANKA - $ 60,000
IRELAND - $ 53,000
DENMARK - $ 52,000
AUSTRIA - $ 50,000
Waxa kale oo laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato inaad aragto Mushaharka Sharciga Macallinka Sare ee ugu sarreeya oo ugu mushaharka yar sida ku cad jaantuska Macallimiinta Isights.
Iyada oo ay jirto awoodda quwadda adduunka, horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadaha is -beddelka ah, waxaa hubaal ah in ay jiri doonaan kala -duwanaansho mustaqbalka ama dib -u -dhac ku yimaada shaqooyinka macallimiinta ugu mushaharka badan waddammada.
Sidoo kale akhri: 25 Siyaabood oo lacag laguugu siiyo Qorista Faallooyinka 2022 | Lacag Degdeg ah
Waa Maxay Shaqooyinka Ugu Lacag -bixinta Badan Waxbarashada?
Waxaa jira shaqooyin kala duwan oo ka shaqeeya waaxda waxbarashada. In kasta oo ay tahay inaad ogaato in Mareykanku uusan bixin mushaharka ugu sarreeya ee shaqooyinka waxbarashada/macallimiinta, isagoo ah ummada ugu awoodda badan dhulka, waxay inta badan u adeegtaa halbeeg si loo cabbiro mushaharka dalalka kale ee shaqooyinka waxbarashada.
Baaritaan ay samaysay Consensus College ayaa lagu taxay 10ka shaqooyin ee ugu mushaharka badan xagga waxbarashada (macallimiinta). Laakiin xogtan ayaa ka hoosaysa kala duwanaansho kale sida waddanka, goobta, waayo -aragnimada, u -qalmashada, dalabka, Hay'adda, maalgelinta, iyo xitaa qiimaha nolosha.
Shaqooyinka waxbarashada iyo macallimiinta ee ugu mushaharka badan waa;
Kormeerayaasha guud waa Saraakiisha Sare ee Dugsiyada. Kormeere ahaan, waxaad kasban kartaa inta u dhaxaysa $ 133,606 ilaa $ 193,983.
2. Maamulayaasha Dugsiyada
Maamulayaasha waxbarashadu waa shaqooyinka macalimiinta labaad ee ugu mushaharka badan. Waxay kasbadaan mushahar u dhexeeya $ 86,970 ilaa $ 129,480 iyo xitaa in ka badan laakiin waxay kuxirantahay arrimo kale oo aan soo sheegnay ..
3. Saraakiisha Sare ee Waxbarashada
Saraakiisha Sare ee Tacliinta waa Agaasimayaasha Waxbarashada oo qorsheeya iskuna dubbarida barnaamijyada waxbarashada ee dugsiyada. Shaqadan, waxaad kasbataa inta u dhaxaysa $ 92,622 ilaa $ 158,000.
4. Maamulayaasha Waxbarashada ama Maamulayaasha Waxbarashada Dugsiga Sare kadib
Waxaad qabataa waajibaadyo kala duwan oo maamul iyo tacliin iyo maamul. Dakhligaagu wuxuu ku kala duwan yahay khibradooda, aqoontooda, waajibaadkooda iyo goobta takhasuska. Waxaad kasban kartaa $ 47,130 illaa $ 83,710 sanadkii.
XIDHIIDHKA: 15 Dhiirigelinta Xigashooyinka Leslie Knope ee Hoggaanka & Adeegga
5. Kaaliyaha Maamulaha
Waxaad u fulisaa waajibaadyada maamulka ama tacliinta ama labadaba iyo doorarka la -talinta macallimiinta, shaqaalaha, iyo ardayda iyada oo si taxaddar leh loo eegayo, loo hormarinayo, loona kormeerayo waxqabadka, waxbaridda, iyo barnaamijyada.
Kaaliye Maamule ahaan, mushaharkaagu wuxuu u dhexeeyaa $ 66,697 illaa $ 89,406.
Isu -duwayaasha Tacliinta waa shaqooyinka macallimiinta kale ee ugu mushaarka badan. Waxay sameeyaan baaritaan ku saabsan hababka waxbaridda, waxay horumariyaan oo hirgeliyaan manhajka, waxayna dejiyaan qorshayaasha waxbaridda.
Isuduwayaasha Tacliinta ahaan, waxaad kasban kartaa $ 42,070 ilaa $ 75,000.
Waxaa lagaa rabaa inaad maamusho macluumaadka iyo ilaha maktabadda. Waxaad kasban kartaa mushaharka $ 42,240 ilaa $ 65,300.
8. Macalimiinta Dugsiga Sare iyo Macalimiinta Kulliyadda
Adigoo ah Macallin Dugsi Sare ama Bare Sare Kulliyad, waa inaad qorsheysaa oo aad bixisaa tilmaamo khaas ah oo ku saleysan edbintaada, ardayda darajada iyo sidoo kale samee cilmi baaris.
9. Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah waxay siiyaan tilmaamo dhallaanka, carruurta, iyo dhallinyarada leh naafonimo maskaxeed, shucuureed, ama jireed.
Shaqooyinka Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah waxaad ka kasban kartaa $ 40,480 illaa $ 63,500.
10. La -taliyayaasha Dugsiga
La -taliyayaasha Dugsigu waxay ardayda, shaqaalaha, macallimiinta, iyo maamulayaasha siiyaan adeegyo hagitaan iyo la -talin.
Waxaad ku sii wadan kartaa mihnad xirfadeed doorkan shaqo oo aad ka kasbato $ 38,740 illaa $ 65,360 ama ka badan taas oo ku saleysan go'aamiyeyaal kale.
Qiimaha Kulliyadda Qiimaha Waxbarashada Ugu Mushaarka Badan/ Shaqooyinka Macallimiinta
Xogta kore waxaa la barbar dhigi karaa tan Kulliyadaha Qiimaha. Xogta laga helay BLS shaqooyinka waxbarashada ugu mushaharka badan oo isugu jira waxbarid ilaa shaqooyin maamul ayaa la soo bandhigay:
Waxbarashada Heerka Gelitaanka Shaqada BIXINTA MEDIAN
Dadka Waaweyn Aasaasiga ah iyo Sare
Waxbarashada iyo Macallimiinta ESL Shahaadada Bachelor -ka $ 55,350
Xirfad iyo Farsamo
Macallimiinta Waxbarashada Shahaadada Bachelor -ka $ 59,140
Kaydiyayaal, Curators, iyo
Shaqaalaha Madxafka waxay arkaan sida loo noqdo Hal $ 52,140
Macallimiinta Dugsiyada Sare Shahaadada Bachelor -ka $ 62,870
Isu -duwayaasha Tacliinta Shahaadada Masterka $ 66,970
Xanaanada iyo Dugsiga Hoose
Macallimiinta Dugsiga Shahaadada Bachelor -ka $ 60,660
Maktabadaha iyo Maktabadda
Khabiirada Warbaahinta Darajada Bachelor -ka $ 60,820
Farsamayaqaannada Maktabadda iyo
Kaaliyayaasha Fiiri Sida Loo Noqdo Mid $ 31,840
Macallimiinta Dugsiga Dhexe Shahaadada Bachelor -ka $ 60,810
Macallimiinta dugsiga sare kadib Bachelor iyo Master degree. $ 80,790
Shahaadada Xiriiriyaha Macalimiinta Xannaanada $ 31,930
Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah Shahaadada Bachelor -ka $ 61,420
Kaaliyayaasha Macallimiinta Kuleejyada qaarkood, shahaado ma laha $ 28,900
Xogta mushaharka Glassdoor, celceliska mushaharka qaranka ee macalinka Maraykanka waa $ 45,082. Tani waxay ku saleysan tahay soo gudbinta shaqaalaha macallimiinta. Miisaanka mushaharka ayaa kordhaya ilaa $ 56,157 oo loogu talagalay macallimiinta leh khibrad ka badan 15 sano.
MA BARAYAAL BARAYAAL BAA jira?
Haa, sababta oo ah iskuuladu waxay si joogto ah ugu fidinayaan adduunka oo dhan waxaana jira macalimiin maaddo oo aad u baahi badan kuwa kale. Tani waxay tarjumaysaa inay ka mid tahay shaqooyinka macallimiinta ugu mushaharka badan.
Xafiiska Shaqada iyo Tirakoobka ee Maraykanka ayaa mashaariic 5% kobcinaya shaqooyinka baridda ugu yaraan lix shaqo oo macallinnimo ah oo aad loogu baahan yahay kuwaas oo ay ka mid yihiin:
1. Ingiriisiga oo ah Luqadda Labaad (ESL) Macallin
Waxaa laga yaabaa inay ku xiiso geliso inaad ogaato in qulqulka muhaajiriinta ka imanaya ESL iyo dalal ku hadla Ingiriisiga oo aan u sii gudubin dalal ay ka mid yihiin UK, US, Canada, baahida macallimiinta Ingiriiska ayaa sii kordhaysa.
BLS waxay mashruuc ka dhigtaa koror 10% ah xagga shaqaalaynta macallimiinta ESL oo leh celcelis mushahar sanadle ah $ 53,630. Si kastaba ha ahaatee, macallimiinta ESL -ka ayaa baahi weyn u qaba oo mushahar fiican ka qaata dalalka Carabta iyo Aasiya sida Kuwait, UAE, Japan, iyo Shiinaha oo aan ku hadlin Ingiriisiga oo ah luqaddooda koowaad.
UAE, waxaad kasban kartaa mushahar u dhexeeya $ 3,500 illaa $ 6000 bishii.
Sida laga soo xigtay Glassdoor, tirada mushaharku waa $ 46,000 ilaa $ 57,000 iyada oo ku saleysan soo gudbinta shaqaalaha macallimiinta.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka macalimiinta ugu mushaarka badan.
2. Macalinka Xisaabta
Waxaa jira koror 3% ah ee saadaalinta shaqada ee macalimiinta xisaabta. Dalalka ugu sarreeya ee u baahan macallimiinta xisaabta waxaa ka mid ah UK, Canada iyo Luxembourg iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Aasiya.
Waxaad ku kasban kartaa ilaa $ 73,230 mushahar shaqadan ugu sarreysa. Qiimaha ay bixisay Glassdoor waa $ 37,000 ilaa $ 66,000.
3. Macalimiinta Cilmiga
Inta badan Macallimiinta sayniska ayaa baahi weyn u qaba dhammaan waddammada oo dhan. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad go'aan ka gaarto waddamada ugu mushaharka badan oo ku yaal shaxda sare.
Macallimiinta mawduuca sida kimistariga, fiisikiska, bayoolaji, iyo kombiyuutarku waxay leeyihiin rajo shaqo oo ah 12% koboc. Mushaharka celceliska sanadlaha ah waa ilaa $ 82,550. Waa shaqooyinka macalimiinta ugu mushaharka badan.
Macallimiinta Chemistry -ga, Glassdoor wuxuu u soo bandhigay mushahar dhan $ 39,000 ilaa $ 72,000.
4. Macallimiinta Luuqadda
Waxaa aad loogu baahan yahay barayaasha luqadaha iyo macallimiinta afafka qalaad iyo suugaanta.
Luuqadaha kobcaya, waxaad ku kasban kartaa baris wanaagsan waa Faransiis, Isbaanish, Talyaani, Jarmal, iyo Carabi, oo ka baxsan meesha ay afafkani ka soo jeedaan.
Luqadaha caalamiga ah ee ganacsiga, dawladda, iyo is -dhexgalka bulshada, waxaa jira 8% saadaalin kobcin ah oo loogu talagalay macallimiinta luqadaha oo leh celcelis mushahar sanadle ah $ 67,640.
Glassdoor wuxuu muujiyaa $ 46,000 ilaa $ 57,000 oo loogu talagalay macallimiinta luuqadaha laba -luuqadood laakiin si kastaba ha ahaatee waxay doorbidaan inay kasban karaan ilaa $ 2000 illaa $ 5000 dheeraad ah sanadkiiba.
Macallimiin laba luqoodle ah ayaa looga baahan yahay waddammada ugu horumarsan uguna horumarsan ee leh soo -galooti aad u sarreeya sida Mareykanka, Kanada, UAE.
5. Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Macallimiintaan dugsiga xannaanada iyo ardayda naafada ah ayaa iyagana baahi weyn loo qabaa. Waxaa jira 8% qiyaasta kobaca saadaasha oo leh celcelis mushahar sanadle ah $ 55,840. Shaqadani waxay kaloo u baahan kartaa shahaado gaar ah.
Sida laga soo xigtay Careerfaqs, waxaa jira baahida sii kordhaysa ee macallimiinta waxbarashada gaarka ah ee Australia, dadka ku jira xirfaddani waxay filan karaan in la siiyo mushahar ka sarreeya celceliska mushaharka waxbaridda.
Marka loo eego Glassdoor, mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 37,000 illaa $ 78,000. Dalalka ugu sarreeya, marka laga reebo Mareykanka, oo leh mushahar wanaagsan SET, waa UK, Canada, iyo Finland, iyo kuwo kale.
Liiska 10 -ka ugu sarreeya macallimiinta ugu sarreeya Shaqooyinka adduunka
Fiiri liiska 10 -kaan shaqooyin ee ugu sarreeya macallimiinta adduunka.
1. Maamule/Kaaliye Maamule
Maamulaha iyo kaaliyaha maamulayaasha labaduba waa madaxda maamulka iyo tacliinta ee dugsiga.
Waxay kormeeraan socodsiinta hawl-maalmeedka dugsiga ay masuulka ka yihiin waxayna go'aan ka gaaraan arrimaha ardayda iyo macallimiinta si waafaqsan yoolalka waxbarashada.
XIDHIIDHKA: 15 Software -ka Wada -sheekaysiga Fiidiyowga Bilaashka ah ee Goob -hawleedka 2022
Mushaharkoodu wuu kala duwan yahay iyada oo ku saleysan waddanka, khibradda, lahaanshaha, iyo heerka dugsiga laakiin wuxuu u dhexeeyaa $ 59,000 illaa $ 138,000 sanadkii celcelis ahaan $ 95,000.
Mareykanka, Kanada, Luxembourg, iyo Australia ayaa kuu noqon doona qaar ka mid ah waddamada ugu fiican oo leh fursado furan iyo dalabyo wanaagsan oo shaqadan ah.
2. Maamulaha Jaamacadda/Kulliyadda
Waxaad ku hawlan tahay socodsiinta hawl maalmeedka dugsiga sida la -talinta, bursary, imtixaannada iyo diiwaannada, xiriirka dadweynaha, iwm.
Maamulayaasha Jaamacadda/Kulliyadda ayaa muhiim ah sababtoo ah waajibaadka lagu fulinayo nidaamka waxbarashada.
Shaqooyinkan macallimiinta ee ugu mushaarka badan, waxaad kasbataa celcelis ahaan $ 94,340 sanadkii halka fursadaha ay ku badan yihiin waddamada horumaray.
Sidoo kale akhri: Waa maxay 7 -da durdur ee Dakhliga Bilyaneerka badankood
Doorkan waxbarasho waa mid aad muhiim u ah waana mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya hay'adaha waxbarashada sare oo leh waajibaadyo sida casharrada fasalka, cilmi -baaris, kormeerid, darajayn iwm.
Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee barafasoorku waa $ 78, 470. Fursadaha ayaa kugu badan waddamada ugu horumarsan adduunka gaar ahaan Maraykanka, Kanada, iyo UK.
4. Isuduwayaasha Waxbarashada
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka kuu wanaagsan oo laga yaabo inaanay si toos ah ugu lug lahayn baridda fasalka. Isku -duwayaasha waxbarashadu waxay qabtaan doorar sida cilmi -baarista iyo horumarinta manhajka.
Mararka qaarkood, doorkan waxaa qaban kara xirfadlayaal xirfadlayaal khaas ah oo laga yaabo inay u shaqeeyaan Gobolka ama Guddiga Agaasimayaasha.
Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee shaqadani waa $ 64,450.
6. Macalimiinta Dugsiyada Sare
Mid ka mid ah shaqooyinka waxbaridda ugu mushaharka badan waa tan macallinka Dugsiga Sare. Laakiin tani waxay si weyn ugu xiran tahay goobta, khibradda, aqoonta, helitaanka macallimiinta, iyo wixii la mid ah.
Shaqada waxaa ka mid ah in lagu baro maado gaar ah fasalka dhexdiisa iyo qiimeynta ardayda. Waxa kale oo ku jiri kara diyaarinta xaashida natiijada.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah waa $ 60,320.
7. Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah
Tani sidoo kale waa macallimiinta/shaqooyinka waxbarashada ugu mushaharka badan. Waxaad raadin kartaa xirfad xirfadeed oo aad ku kasban kartaa waayo -aragnimo kaa caawisa inaad u xaadirto ardayda iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah adigoo ku dhisaya xirfadaha loo baahan yahay si ay horumar ugu gaaraan nolosha.
Iyo celceliska mushaharka sanadlaha ah ee jagadan waa $ 59,780.
8. Macalimiinta Dugsiga Dhexe
Doorkan, waxaad xoogga saari lahayd dhisidda aqoontii hore iyo u diyaarinta ardayda dugsiga sare. Kani waa shaqo waxbarasho oo mushahar fiican leh markaad hormariso aqoontaada iyo waayo -aragnimadaada.
Tiro aad u tiro badan oo ka tirsan waddamada Yurub iyo Aasiya ayaa u baahan doona adeeggaaga.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Mareykanka waa $ 58,600. Si kastaba ha noqotee, waddamada Aasiya sida Japan, Shiinaha, Kuuriya, waxay bixiyaan mushahar badan shaqooyinkan halka fursadaha ay badan yihiin.
9. Macalimiinta Dugsiyada Hoose
Kani waa kaalin adag laakiin waa abaal marin markaad ku dhisayso xirfaddaada dulqaad iyo qiiro.
Waxay ku lug leedahay la shaqaynta carruurta yaryar, ee raba inay sahamiyaan adduunkooda yar oo ay baraan maaddooyin hoose oo kala duwan. Waxaad ku heli kartaa shaqooyinka ugu fiican shaqadan.
Xaddiga mushaharka ee jagadan waa $ 37,700 illaa $ 95,200 sanadkii celcelis ahaan $ 57,980. Inta badan waddamada Yurub waxay u baahan doonaan adeegyadaada oo leh shahaado iyo shahaado sax ah.
10. La -taliyaha Dugsiga iyo Xirfadda
La-taliyayaasha dugsiga iyo mihnadaha labaduba waxay ka caawiyaan ardayda inay go'aamiyaan himilooyinkooda mustaqbalka iyo kuwa mustaqbalka fog.
Doorkan nidaamka waxbarashada lama wiiqmi karo. Yurub waxay siisaa fursadaha ugu fiican La -taliyayaasha.
Celceliska mushaharka sanadkii ee lataliyayaasha dugsiga iyo xirfadaha waa $ 56,310.
Marka la soo koobo, helidda shaqooyinka macallimiinta ugu mushaarka badan waxaa inta badan lagu go'aamiyaa arrimo ay ka mid yihiin goobta, maadada, khibradaada iyo aqoontaada, iyo weliba baahida hadda jirta.
Tirakoobyada la muujiyey way kala duwanaan karaan ama waxbaa laga beddeli karaa isbeddellada hadda jira. Wadamadu waxay kor u qaadayaan doorka wax -barista iyo inay macallinka ku darayaan qiyam badan.
Markaa hadda waad bilaabi kartaa inaad yeelato xirfad dhammaystiran oo ku saabsan shaqooyinka macallimiinta ugu mushaharka badan.
10ka ugu sarreeya ee ugu sarreeyad Agaasimayaasha Adduunka
10 Majalado Maaliyadeed ee ugu Fiican Online Go'aannada Ganacsiga Xog -ogaalka ah ee 2022
Kamarada Rakibaadda Amniga Guriga: Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Kaamirooyinka guriga ayaa ah aaladaha wax-ku-qabta, taas oo macnaheedu yahay in aad rakibto oo aad la socoto intaad shaqaaleysiin lahayd ammaan...
Twitch, oo la bilaabay 2011 waa madal si toos ah uga socota bar-tilmaameedka ciyaartoyda. Ciyaartoyda waxay la xiriiri karaan cayaartoyda kale iyo...